Kushanda kweWMS muindasitiri yemishonga Warehouse Management System (WMS), yakapfupikiswa seWMS, isoftware inobata nzvimbo yekuchengetera zvinhu. Izvo zvakasiyana neyekuverenga manejimendi. Mabasa ayo ari kunyanya muzvinhu zviviri. Imwe ndeyekuseta imwe warehou ...
Yakateedzerwa nzira yekukanda crane ndeye yakakosha kireni yakagadziriswa nechitarisiko cheatatu-mativi imba yekuchengetera, inonzi stacker, yakakosha kusimudza nekubata michina mune matatu-mativi imba yekuchengetera, uye chiratidzo chehunhu o .. .
Shuttle mota bvunza rubatsiro
Iyo shuttle inosunungura vashandi, asi iyo isinganzwi yekuchengetedza uye yekudzosa michina inodawo kuchengetedzwa. Huya uone kana mamiriro anotevera achiitika panguva yekushandiswa kweshuttle. 1. Hoko inonzwa kupisa kune inobata Tarisa kuti pane exter ...